जुनसुकै पुरुषलाई आकर्षित गर्ने क्षमता हुन्छ यस्ता युवतीहरुमा - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण १०, २०७६ समय: ११:५६:५१
ज्योतिष शास्त्रलाई विश्वास गर्ने हो भने केही राशि भएका युवतीहरुमा विशेष गुण हुन्छ । उनीहरु आफ्नो राशिको प्रभावले जो सुकै पुरुषलाई पनि पगाल्न सक्छन् । १२ राशिमध्ये चार राशि भएका युवतीहरु आफ्नो सुन्दरता बिना नै कसैलाई रिझाउन सक्षम हुन्छन् ।
गर्भावस्थामा संगीत : के भन्छ अध्ययन ?
तपाईंले सुन्नु भएकै होला, गर्भवतीले संगीत सुन्नु राम्रो हो । त्यसो त गीत संगीत सुन्न कसलाई पो मन पर्दैन र ? आफ्नो मुडअन...
टिकटक प्रतियोगितामा अभिनय गर्ने लाई नगद र कलाकार बन्ने अवसर
मोरगं । नेपालमा पहिलो पल्ट नेपाली फिल्म फेक फ्रेण्डको गीतमा टिकटक प्रतियोगिता नेपालमा पहिलो पल्ट नेपाली फिल्म फेक फ्रेण्...
पापी कोरना सार्बजनिक
सुनसरी । कोरोना भाइरसले यतिबेला संसारलाइ नै आतंकित बनाइरहेको छ । संसारलाइ आतंकित बनाएको बेला नेपालमा पनि यस भाइरसको संक्...
गर्लफ्रेन्ड बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी चार कुरा गर्नुहोस्
यदि कोही युवती तपाईंलाई निकै मन परेको छ भने तपाईंको सपनाको रानी आफ्नो जीवनमा ल्याउन चाहनुहुन्छ । यदि चाहनुहुन्छ भने यी ४...
नाचनाच सिजन ५को प्रतिस्पर्धामा १९ जनालाईलाई पछि पार्दै जेनिसा प्रथम
इटहरी । नाच नाच सिजन ५को ताज इटहरी मोडल एकेडेमीकी जेनिसा पौडेलले जितेकी छन । लामो समय देखि सुनसरीको इटहरीमा रहेर नृत्यकल...